ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားများ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်မှုကအခွင့်အလမ်းကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု Imamoglu | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားများ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်မှုကအခွင့်အလမ်းမပေးဟု Imamoglu
06 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Istanbul မြို့တော်စည်ပင်သာယာဥက္ကဌ Ekrem Imamoglu, Kabatas-Mahmutbey Metro Line ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပြီးစီးခြင်းအခမ်းအနား, Besiktas အတွက်အများပြည်သူဘတ်စ်ကားမတော်တဆမှုကဆိုသည်။ ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားများ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုအခွင့်အလမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု Imamoglu ကပြောသည်။
Imamoglu, Besiktas သည်ပြီးခဲ့သည့်နေ့ကအစ္စတန်ဘူလ်လူမျိုးကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခန်း၏ဒုတိယဥက္ကchairman္ဌကလည်းအရာရှိအချို့ကဘတ်စ်ကားအတွင်းတွင်ကင်မရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းမရှိ၊ သို့သော်ပုံတစ်ပုံပေါ်လာသည်။ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွင်ယာဉ်မောင်းသည်ပုံကိုနှောင့်ယှက်ပုံရသည်။ ဒီဗီဒီယိုတွေကိုမြင်ဖူးလား။ ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယခုမှစလိမ့်မည်နည်း သင်သည်ဤပုံရိပ်များ၏ပုံပျက်ပုံဖော်အနက်ကိုဘယ်လို?
ငါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်။ ငါအနီးကပ်လိုက်နာ ငါသေဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားချင်းဆွေမျိုးသားချင်းများဆီကိုသွားမယ်။ သူ့မိသားစုကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းနည်းကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်ပါတယ် ငါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံမှသနားခြင်းကရုဏာအလိုရှိ၏။ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်၊ မင်းဘဝကိုပြန်မရနိုင်ဘူး။ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ ယာဉ်မောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်ဒေါသများကြောင့်ဤအခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွင်းဆက်နှင့်လက်စွပ်ထဲတွင်မည်သူမဆိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကို, ငါတို့အစပြုခဲ့ပြီးအမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်မှုယန္တရားအားကောင်းလာစေရန်နှင့်အစွမ်းကုန်ဂရုတစိုက်နှင့်အတူကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုမှာပိုပြီးတိကျခိုင်မာတဲ့ကြီးကြပ်မှုပေးတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအထိခိုက်မခံတဲ့အပြင်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီသဘောနဲ့အရာအားလုံးဟာအချိန်ယူရတယ်။ ရုတ်တရက်သင်စုဆောင်းမိသောအရာအချို့ကိုရှာဖွေ။ မရပါ။ လွှတ်တော်ဥက္ကpresident္ဌ၏ကြေညာချက်သည်လက်ရှိယဉ်ကျေးမှု၏ဘာသာစကားကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်မြင်သည်။ ဝမ်းနည်းပါတယ် ဒါကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလို့မရဘူးလဲ။ သင်၏အဓိကအလုပ်ကိုမည်သို့အာရုံမစိုက်နိုင်မည်နည်း။ မင်းဘာကိုအာရုံစိုက်နေတာလဲ ဒီဘတ်စ်ကားကိုဘယ်သူပိုင်သလဲ မင်းသူ့ကိုအာရုံစိုက်နေသလား ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ရဲ့အဖြေကိုပေးပါသလား။ ငါတို့လုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ 16 လူ ဦး ရေသန်း ဤလူများ၏တည်ရှိမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုလုံခြုံမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတနှင့်အခြားမိတ်ဆွေများအားလုံးသည်တင်းကြပ်သောကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ရှိစေရန်သေချာစေပြီး ၄ င်းတို့၏သဘောသဘာဝကိုထိန်းညှိခြင်း၊ သူတို့၏အလုပ်အကိုင်ကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုခြင်း၊ နိုင်ငံသားများကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခြင်းနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထည့်သွင်းထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ချက်ချင်းတုန့်ပြန်ခြင်းမရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်ပါသည်။ အတိတ်မှပစ္စုပ္ပန်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအချို့ဖြစ်စဉ်များသည်ဤနည်းအားဖြင့်ပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအသက်တာအပေါ်ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်ကို ထပ်၍ လိုလားသည်။
"ကျနော်တို့လက်ဝါးကြီးအုပ် FIR အသိအမှတ်မပြုလိမ့်မည်
ပြည်သူ့ဘတ်စ်ကားများနှင့်ပတ်သတ်သည့်စည်းမျဉ်းသစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုကောလာဟလများလည်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြိုတင်မျှော်မှန်းသည့်အတိုင်းအတာသို့မဟုတ်ပိုမိုတင်းကြပ်သောကြီးကြပ်မှု၏အမည်တွင်သို့မဟုတ်သင် IMM သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်သင်စဉ်းစားပါသလား။
ကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်သိမ်းရန်မဆုံးဖြတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုလေးစားသည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအလယ်အလတ်နှင့်ရေရှည်တွင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်အတွက်လည်းလုပ်ဆောင်နေပြီး၊ ယခုနှစ်အကုန်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်ရုံကြီးတစ်ခုကျင်းပလိမ့်မည်။ ဤတွင်ကဏ္ sectors အားလုံးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများအားလုံးကိုဆွေးနွေးပါမည်။ သို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့ထိုကဲ့သို့သောအများပြည်သူဘတ်စ်ကားဖယ်ရှားပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသည်: လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ရှင်းပါတယ်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တည်ရှိနေသော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ယခု 60-70 bus နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုနေသူနှင့်ဆိုင်သောကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ medik အပေါ်တွင်ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာကွယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်ယန္တရားနှင့်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုလက်မခံနိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ ငါတို့မှာİETT, Otobüs A.Ş. ဤသည်နှင့်အချို့သောကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကုန်သွယ်မှုကိုချဉ်းကပ်နည်းကိုဤနှင့်အခြားယန္တရားများအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ကျဉ်းမြောင်းသောဇုန်အသုံးချမှုတွင်ပိုမိုအားကောင်းလာသောအခါအထူးသဖြင့်အချို့သောဘတ်စ်ကားများကိုအခြားဒေသများသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အချို့သောကုန်သွယ်မှုများသည်ကြီးမားသောပြtroubleနာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောအခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပါ။
အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားသည့်နေ့၌ကားထဲတွင်ကင်မရာကိုပိတ်ထားခြင်းသည် Karatma အထောက်အထားများလည်းပါဝင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်သည်အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည့်ဒုတိယသမ္မတနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါသလား။ မင်းမှာဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေရှိလား။ မင်းဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ
အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်ကားအများစုသည်ကင်မရာများကိုမဖမ်းယူနိုင်သည့်အမြင်များရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သောမှတ်တမ်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသလော။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများသည် ထပ်မံ၍ တင်းကျပ်သောစစ်ဆေးမှုများလုပ်နေကြသည်။ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ရမယ် ထို့အပြင်မီးခိုးမြူပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်၏ဖြစ်စဉ်သည်မှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့မှာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းမျဉ်းအပေါ်၊ ဘတ်စ်ကားပိုင်ရှင်နှင့်အခြားအရာများကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုများပြုလုပ်မည်။ အခန်းသည်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အခန်းအားတိုက်ရိုက်ပိတ်ဆို့မှုမပြုလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ဤကြေငြာချက်ကိုကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေအားဤမြို့နှင့်သူတို့ဆက်ဆံရေးတွင်ထိပ်တန်းမျက်နှာပြင်မှပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်လိုက်နာခဲ့ပါသည်။ သူ့ကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့မခံစားရဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကဒီဝါကျအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ပြောဖို့သူတို့လုပ်ဖို့လိုတာကိုပဲလုပ်လိမ့်မယ်။ ငါတို့မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး